Shirkadaha Daallo Airlines iyo Jubba Airways oo samaystay Isbahaysi Adag | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Shirkadaha Daallo Airlines iyo Jubba Airways oo samaystay Isbahaysi Adag
Shirkadaha Duulimaadyada ee Daallo Airlines iyo Jubba Airways oo horey u ahaan jirey kuwo tartan adag ka dhexeeyo, Suuqa Soomaaliya keli ku ahaa ayaa hadda doonaya in ay ka soo wada jeestaan hal meel, kadib markii suuqa ay ku soo ciriiriyeen shirkadaha duulimaadyada ee Turkish Airlines, flydubai iyo Shirkadda diyaaradaha ee Itoobiya.
Wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysa Mohamed Yassin oo ah Agaasimaha shirkadda Daallo ayaa yiri, “Suurta gal maaha in aan dib u noqono. Waxaan isku deyeynaa in aan awoodeena isu geyno, si aan u wajahno caqabadaha cusub”.
Shirkadda duulimaadka ee Turkish Airlines ayaa kor u qaadey duulimnaadka ay ku tegi jirtey magaalada Muqdisho waxaana laga dhigey maalinle halka ay horey u ahayd todobaadkii afar jeer. Sidoo kale shirkadda flydubai ayaa bisha saddexaad ee Maarso bilaabeysa duulimaad cusub, halka shirkadda duulimaadka ee Itoobiya ay ka degto magaalada Hargeysa.
Shirkadaha Jubba iyo Daallo ayaa muddo dheer ka shaqeynaayey isku xirka Bariga Afrika iyo Dalalka Carabta iyada oo Soomaaliya ku jirto xaalad adag, inkasta oo dhanka adeega shirkadahan ay ahaayeen kuwo in badan oo macamiisheeda ka mid ah aysan ku qanacsaneyn, qiimahana tigidhadana ay si xad dhaaf ah kor ugu qaadeen, ayaa isbedelka dhanka nabadda laga gaarey ee Soomaaliya waxay keentey in lala galo tartan dhanka duulimaadka ah.
Labada shirkadood ee Daallo Airlines iyo Jubba Airways ayaa hadda samaystey isbahaysi loogu magacdarey African Airways Alliance, waxaana ay ballan qaadeen in ay kordhin doonaan duulimaadkooda dalal cusub isla markaana ay wax ka bedeli doonaan adeegooda.
Shirkadaha Daallo iyo Jubba ayaa sanadkii 2014 qaadey 250000 oo rakaab ah, waxaana ay faa’iido sameyeen $75 milyan oo dollarka Maraykanka ah halka Shirkadda Turkish Airlines oo keliya ay qaadey 54.7 milyan oo rakaab ah sanadkii 2014.
Shirkadda Daallo ayaa laga lee yahay oo ka diiwaan gashan dalka Jabuuti, halka Jubba ay ka diiwaan gashan tahay dalka Kenya.
Shirkaddii Somali Airlines ayaan weli dib hawada ugu soo noqon tan iyo markii ay bur-burtey Dolwaddii dhexe ee Soomaaliya.